GarsoorNews - Senator maanta Lagu Weeraray Magaalada Muqdisho
Muqdisho (GarsoorNews) — Gaari uu lahaa Xildhibaan ka tirsan Aqalka Sare ee dalka, ayaa lagu weeraray Magaalada Muqdisho,gaar ahaan Degmada Hodan.
Senatorka gaarigiisa la weeraray ayaa lagu magacaabaa Xuseen Cali Xaaji, waxaana uu gaarigu marayay meel u dhaw Isbitaalka Masaarida ee ku yaal wadada u dhaxeysa Tarabuunka Iyo Ex- Isbitaal Digfeer .
Gabar uu adeer u yahay Xildhibaanka iyo ruux kale oo gaariga saarnaa ayaa halkaasi ku dhaawacmay.
Xildhibaanka oo la hadlay Risaala ayaa sheegay in uusan la socon gaariga xilliga la weeraraayay.
Ragga hubaysan ee gaariga Xildhibaanka weeraray ayaa watay gaari yar oo noociisa uu yahay Spacio, markii ay rasaasta la dhaceen gaariga, ayaa meel ku dhaw goobta falka uu ka dhacay oo ay joogeen ciidanka NISA, durba ciidanka ay ku baxeen falka.
Ciidamada NISA iyo raggii hubaysnaa ee gaariga watay ayaa xabado dhawr ah isku dhaafsaday goobta, kadibna waxaa suuragashay raggii hubaysnaa inay meesha ka baxsadaan, iyadoo ay suurageli wayday in la soo qabto.
Qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay rasaasta ciidanka NISA iyo ragga hubaysan ay isweydaarsadeen muddo daqiiqado ah ay socotay, laakiin lama sheegin waxyeelo ka dhalatay.
Goobta lagu weeraray gaariga Senator-kan ayaa Bishii hore sidan oo kale waxaa loogu weeraray gaari ay la socdeen ilmo uu dhalay mid ka mid ah masuuliyiinta Shirkadda Dahabshiil, halkaasina waxaa lagu dilay saddex ruux, halka afar kalena ay ku dhaawacmeen.